Fampianarana ambony : Hisokatra ny lalam-piofanana maritrano -
AccueilSongandinaFampianarana ambony : Hisokatra ny lalam-piofanana maritrano
Fampianarana ambony : Hisokatra ny lalam-piofanana maritrano
Tsy misy ny mpanao maritrano na lazaina amin’ny teny vahiny hoe “architecte” momba ny fanajariana ny tany sy ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Fantatra fa mbola vitsy ny manam-pahaizana manokana momba izany sady tsy misy sekoly natokana hanofanana ny maritrano na “architecture” eto amintsika. Ny maritrano moa dia midika ny taozavatry ny fanamboarana trano. Izany hoe, hairaha amin’ny famoronana endrika amam-bika sy ny fanorenana trano. Noho ny fahavitrian’ny mpanao maritrano izay dia lasa ny injeniera amin’ny BTP no manao ny asan’ny mpanao maritrano nefa resaka teknika ihany no an’iry voalohany. Momba ny fanorenana no hiantsorahany ny BTP, fa lafiny “maquette” no ataon’ny mpanao maritrano. Vokatr’izay tsy fananana mpanao maritrano izay anefa lasa ratsy endrika ny tanàna, toy ny hita eto an-drenivohitra. Antony nahatonga ny sekoly IST Antananarivo hitady fiaraha-miasa amin’ny oniversite any Belgique hanofana teknisianina eo amin’ity sehatra ity. Izay tafiditra ao anatin’ny drafitra fampandrosoana ity sekoly ity ary nahazo tohana avy tamin’ny AEF (Agence, education et formation). Ity lalam-piofanana vaovao ity izay ezahina ho tafapetraka eny anivon’ny sekoly IST Antananarivo afaka taona vitsivitsy, araka ny fanamarihan’ny tale jeneraly ny IST Antananarivo.
“Tafiditra ao anatin’ny drafitra fampandrosoana ny IST Antananarivo ny lalam-piofanana maritrano ary ny boky no mandrafitra ny asa atao. Hita ao anatin’io boky io, ny fananganana ny lalam-piofanana mikasika izay “architecture” eto Madagasikara izay. Lalam-piofanana mbola tsy misy nefa nahenoana feo avy amin’ireo matihanina miasa amin’io sehatra io. Efa voahangona ny fepetra rehetra mety manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia efa nahitana mpiara-miombon’antoka ihany koa, izay eto an-toerana, sy any ivelany ka hiarahana amin’ny oniversite Hasselt izay any Belgique. Fa hisy koa ny fizarana traikefa sy fanohanana avy amin’ny « agence universitaire de la francophonie ». Mino izahay fa ao anatin’ny herintaona na roa taona raha ela indrindra hisokatra io lalam-piofanana mikasika ny « architecture » io », hoy hatrany ny fanazavan’ny tale jeneraly ny IST Antananarivo, Pr Rakotomalala Jean Lalaina.
Niezahana naely hatrany ny tsaho teto andrenivohitra ilazana fa tsy etsy amin’ny hopitaly HJRA intsony i Razaimamonjy Claudine taorian’ny fiverenany avy nitsabotena tatsy amin’ny nosy Maorisy. Nisy mihitsy aza ireo mpahay lalàna izay nanao fanahiniana ...Tohiny